အနုပညာ – We Love Cele
မွေးနေ့လေးမှာ အနားမရှိပေးနိုင်တဲ့ဖခင်အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ် ပုံဖော်လိုက်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
အွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ရှုသူ သိန်းကျော်သွားတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ သီချင်းကို Cover Song ပြန်လည်သီဆိုခဲ့သူ
မေမဒီကို အကြီးအကျယ်ကြွေဆင်းစေခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ လုပ်ရပ်
သူမရဲ့ ပုံလေးကို အရေး ပြား ပေါ် တက်တူးထိုးထားတဲ့ ပရိသတ်ကြောင့် မေမဒီတစ်ယောက် အရမ်းလည်းပျော်နေသလို အံ့လည်း အံ့သြနေခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Idol Season3မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် မေမဒီဟာ ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် အရမ်းကို အံ့သြသွား ခဲ့ရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ Tay Za လို့ ခေါ်တဲ့...
ရင်သွေးလေး လွယ်ထားရပြီဖြစ်တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်း လေးက တော့ သူမမှာ ရင်သွေးလေး လွယ်ထားရပြီဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းလေးကတော့ သူမမှာ ရင်သွေးလေး လွယ်ထားရပြီဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ ဒီသတင်းကို သူမ သိသိချင်းမှာလည်း အရမ်းကို ပျော်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း ရင်သွေးလေး လွယ်ထားရပြီဆိုတဲ့...
တစ်နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုသူ ၅ ထောင်ကျော်သွားတဲ့ ပိုပိုရဲ့ ကြောင်ဖြူမလေးဖြစ်သွားတဲ့ ဗီဒီယို
ခုနောက်ပိုင်း ပရိသတ်တွေကြားအမြင်တမျိုးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ပိုပိုတစ်ယောက်ကတော့ သူမ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ အမြဲတမ်း Activities လေးတွေကိုတင်လေ့ရှိသူလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ Masterpiece အခွေကိုထွက်ရှိထားပြီး အခွေပေါင်း 5000 ကျော်လောက်ရောင်းခဲ့ရတဲ့ ပိုပိုအတွက်ကတော့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ Single ဘဝမှာသာယာပျော်ရွှင်စွာ နေနေပြီး အချစ်ဆိုတာကိုလည်း သူမဘက်က အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ချစ်တတ်သူတစ်ဦး လို့ သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ Tik Tok Video...
ဇာဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ အချိုးအကွေ့တစ်ခုလို့ ပြောရမလိုပါပဲ။ ဇာဏ်ခီပါဝင်ပြီးသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရှင်ကားစတင်ရုံတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အနှစ်နှစ်အလလ တောင့်တခဲ့တဲ့ အရာကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ရုံတင်ပြီးချိန်မှာတော့ ပရိသတ်တွေ တခဲနက်ရရှိသွားတဲ့ ဇာဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီဟာ အခုဆိုရင် တတိယမြောက်ကားကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်သစ်တွေကို လက်ရှိမှာတော့ ခေါ်ယူနေပြီးတော့ နောက်ထပ်ရိုက်ကူးမယ့်ဇာတ်ကားတွေမှာ လက်တွဲခေါ်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ပါ ခံလာရတဲ့...
ဒီနေ့မှာ အောင်ပန်းမှာ ဂေါက်ရိုက်တာနိုင်လို့ ဇာတ်ပို့တွေဖြစ်တဲ့ ယွန်းရွှေရည်၊ အိတုံ၊မျိုးမျိုးခိုင်၊ ရဲလေးမ၊နန္ဒကျော်စွာတို့ကို မုန့်ဖိုးပေး ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးက လက်ရှိမှာ "တရာလား" ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားကို အောင်ပန်း မှာ ရိုက်ကူးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါက်ရိုက်ရတာကို ဝါသနာပါတဲ့ ပြေတီဦးဟာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေရင်း အားတဲ့အချိန်တွေမှာ ဂေါက်ရိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း...
စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့မှာ အာဘွိုင်းနဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ရဲ့ ဘဝလေးထဲကို ကံကောင်းခြင်းတွေသယ်ဆောင်လာပြီး ရောက်ရှိလာခဲ့တာကတော့ သမီးလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်မှုတွေကို လျစ်လျူရှုပြီး နှစ်ယောက်သား ချစ်မြတ်နိုးစွာနေရင်းကနေ ခုဆိုရင်တော့ မိသားစုသစ်လေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်သွားရပြီဖြစ်ပါတယ်။ မွေးတည်းက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းခဲ့တဲ့ သမီးလေးကို ပရိသတ်တွေကလည်း အရမ်းချောလွန်းလို့ မှတ်ချက်တွေပေးနေကြပါသေးတယ်။ သမီးလေးကိုတော့ အာဘွိုင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံက Scarlett Phyo Tun လို့ နာမည်လေးပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စမွေးစဉ်က...
ကျောင်းသွားခါနီး တိတ်တိတ်လေးချန်ခဲ့တဲ့ သမီးလေးရဲ့ စာတစ်စောင်ကြောင့် မျက်ရည်ကျမတတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဇင်သဲနိုင်
ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေရခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်းဟာဆိုရင် ချောမောလှပတဲ့ ချစ်ဇနီးလေးနဲ့ ချစ်စရာအလွန်ကောင်းတဲ့ သားလေး၊သမီးလေးတွေနဲ့ ဘ၀ကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေသူပါ။ ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ဇနီးမောင်နှံက မနေ့က သမီးလေးမွေးနေ့ကို သမီးလေးအတွက် Surprise မွေးနေ့ပွဲလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ တာကြောင့် သမီးလေးက အဖေနဲ့ အမေကို ကျောင်းသွားခါနီး စာရေးပြီးချန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုင်ဇေရဲထွန်း ရဲ့သမီးအကြီးလေးမွေးနေ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ချစ်ဇနီး ဇင်သဲနိုင်က လည်း "...
ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ
တစ်လ၊ တစ်လကို ဒေါ်လာတွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ၀င်ငွေတွေရှိနေတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေအဖိ်ု့ကတော့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာဟာ သိပ်မဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒာကြောင့် အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီး တန်ဖိုးကြီးမားလှတဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. Song Joong Ki and Song Hye Kyo (ဒေါ်လာ ၈ ဒဿမ ၇ သန်း) 2....
Swedish Idols ရဲ့ season 14 မှာ ကရင်လူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့ Ki Soe က ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေပြီး မြန်မာလူမှုကွန်ရက်မှာလည်း သူက ရေပန်းစားနေပါတယ်။ Ki Soe ဟာ အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ကတည်းကနေ ဆွီဒင်နိုင်ငံကို မိဘတွေနဲ့အတူ ရောက်ရှိအခြေချနေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းကနေ သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Ki soe ဟာ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမှာပဲ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး...
လှပတဲ့မျက်နှာနဲ့ အချိုးအစားပြေပြစ်တဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် ကံအကျိုးပေး မကောင်းခဲ့သူ ဆယ်ကျေ်ာသက်အရွယ် Chiara Bordi ဟာ ဘဝကို အရှုံးမပေးတာကြောင့် အီတလီ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင်အဆင့်ထိ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ မလျှော့တဲ့ ဇွဲလုံ့လ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းခဲ့မှုတွေက အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အပေါင်းကို အံ့သြမှင်သက်စေခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့မှာ အင်္ဂါနေ့က...
© Copyright 2018 . All rights reserved . We Love Cele
We Love Cele မှ ကိုယ်တိုင် ရေးသားထားသော Articles များအား လူကြီးမင်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် Credit ပေးပြီး လေးစားစွာဖြင့် ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ More
We Love Cele မှ ကိုယ်တိုင် ရေးသားထားသော Articles များအား လူကြီးမင်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် Credit ပေးပြီး လေးစားစွာဖြင့် ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါသည်။